Soo-saareyaasha Qaab-dhismeedka Ugu Fiican & Warshad | Guoshengli
Sharaxaadda Xaashida Lacagta
Tilmaamo dheeraad ah oo loogu talagalay boorsooyinka qaabaysan
Zi Siibtarrada dib loo dabooli karo: shaabad wanaagsan oo dib loo isticmaali karo
Design Naqshad gaar ah oo qaabaysan: boorsooyin qaabaysan ayaa loo goyn karaa nooc kasta oo ka mid ah, oo ka indho qabasho wanaagsan boorarka caadiga ah.
Waxaan nahay badeecad caalami ah oo tayo sare leh boorsooyin daabacan oo daabacan sida: boorsooyinka istaaga, boorsooyinka kafeega, boorarka hoose ee fidsan ee loogu talagalay cuntada iyo warshadaha aan cuntada ahayn. Tayada sare, Adeegga ugu fiican iyo qiimaha macquulka ah waa dhaqankeena warshad.
1. Tiknoolajiyadda Daabacadda Si Fiican Loo Qalabeeyay
Mashiinka ugu dambeeya ee casriga ah, hubinta alaabada aan soo saarnay heer tayo sare leh. Oo kuu soo bandhigaya xulashooyin kala duwan adiga.
2. Waqtiga Gaarsiinta
Khadka tooska ah iyo soosaarka xawaaraha sare wuxuu damaanad qaadayaa waxsoosaarka waxtarka sare. Hubinta gaarsiinta waqtiga-waqtiga ah
3. Dammaanad Tayo
Laga soo bilaabo alaabta ceeriin, soo saarista, si loo dhammeeyo alaabada, talaabo kasta waxaa dib u eegay shaqaalaheena tayada wanaagsan ee tababarka tayada leh, hubinta inay la kulmaan heerka tayada aan dammaanad qaadno.
4. Adeegyada Iibinta Kadib
Waxaan kula tacaali doonnaa su'aalahaaga ogeysiiskayaga ugu horreeya. Dhanka kale qaadashada masuul kasta si ay gacan uga geysato xallinta dhibaato kasta.
Pouches Sawirro badan oo qaabeysan
Hore: Foorsooyinka hoose ee Flat
Xiga: Boorsooyinka la qasaaray